Koety: niteraka tabataba ny fampianarana dihin’ny kibo tao amin’ny toerana iray fanatanjahantena ho an’ny vehivavy, nitondra hatramin’ny firotsahana an-tsehatry ny governemanta · Global Voices teny Malagasy
Vehivavy irery ihany no hampianatra amin'ilay kilasy ho an'ny vehivavy
Voadika ny 24 Aogositra 2021 5:33 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Italiano, Español, Français, Română , English
Marobe ireo mpanao lalàna avy ao amin'ny Antenimieram-pirenena koetiàna no manao tsindry amin'ny fanjakàna mba hanakatonany ilay klioba fanaovan'ny vehivavy fanatanjahantena. Sary ho an'ny sehatry ny daholobe.
Lahatsoratra nivoaka voalohany tamin'ny 13 Aogositra 2021 tao amin'ny Raseef22, sehatra tsy miankina fampahalalambaovao amin'ny fiteny arabo, ary dika nasiam-panovàna no navoaka etoana araka ny fifanarahana nifanaovana hifampizara votoaty.
Nihazakazahan'ny ministeran'ny varotra sy ny indostria ao Kôety ny fanakatonana klioba iray fanaovana fanantanjahantena, ary ny fampitsaharana ireo rehetra efa tsinjo mialoha fa ho mpikatroka ao amin'io amin'ny hoavy, ho setrin'ny olana nateraky ny fanoherana malaza sy nataon'ny parlemanta momba ny fampianarana dihin'ny kibo ataon'ilay klioba fanatanjahantena.
Tao anaty fanambaràna manokana nataon'ny fantsona Al-Hurra miorina any Etazonia, nohamafisin'ny mpitantana ilay klioba fa, tamin'ny 9 Aogositra, no nalefan'ny ministera taminy ny fampahafantarana ôfisialy momba ilay fanakatonana, ary nampanantsoina izy — ankoatra ireo tomponandraikitra hafa ao amin'ilay klioba — mba hatao fanadihadiana. Ny 8 Aogositra, andro iray talohan'io dia efa nakaton'ny ministeran'ny varotra sy ny indostria ilay klioba, talohan'ny nampahafantarany izany tamin'ny tompony.
Takian'ny vahoaka ao Al-Jahra ny fandraràna ilay kilasy fampianarana dihin'ny kibo ao amin'ny toerana iray fanaovan'ny vehivavy fanatanjahantena ao amin'ny distrikan'i Al-Jahra. Lavin-dry zareo ny fanohanana karazam-pampianarana tahaka izany, izay tsy mety ho an'ny fiarahamonina kôetiàna, indrindra fa ny Al-Jahra.
Krizy nanomboka taorian'ny dokambarotra iray momba ny fisian'ny kilasy fampianarana dihin'ny kibo natao ho an'ny vehivavy irery ihany, manomboka ny 8 Aogositra hatramin'ny 24 Aogositra, ka 78 dinara kôetiàna no sarany (260 dolara amerikàna eo ho eo), avy amin'ny “Viva Fit”, toerana iray fanaovan'ny vehivavy fanatanjahantena ao avaratry ny governoràn'i Al-Jahra, izay toerana ahitàna betsaka ny foko iray sy vahoaka fatra-pifikitra amin'ny fombandrazana.
Niteraka resabe ilay dokambarotra, nahatonga ireo parlemantera marobe tao amin'ny antenimieram-pirenena kôetiàna haneho ny ahiahin-dry zareo momba ny toetoetr'ilay kilasy, tamin'ny filazàna azy io ho manitsakitsaka ny soatoavin'ny fiarahamonina kôetiàna. Nanery ny manampahefana io mba hanao filazàna ny fanakatonana ilay toerana fanaovana fanatanjahantena sy hampiantso ireo tomponandraikitra tao hatao fanadihadiana.
Lazain'ireo loharanombaovao kôetiàna fa ny departemanta mpanaramaso ny varotra avy amin'ny ministeran'ny varotra no hanao ny fanarahamaso akaiky ireo dingana sisa tavela tamin'ilay fanakatonana.
Fandàvana sy fiarovantena
Ao an-damosin'ilay fanapahankevitra nanakatonana ilay klioba ny tsindry nataon'ireo parlemantera sasantsasany, isan'ireny ilay Solombavambahoaka Fayez Ghannam Al-Jumhour, izay nanambara tao amin'ny kaontiny Twitter hoe:
Niantso an'i Dr. Abdullah Al-Salman, ministeran'ny varotra sy ny indostria aho, ary nampahafantatra azy ny fisian'io fanitsakitsahana ny fanomezandàlana io (fanomezandalana araka ny lalàna) ary ny soatoavintsika, ka nanome toky ahy izy fa handray fepetra mifanaraka amin'ny lalàna manoloana ireo nomena fahazoandàlana ary hanakana ny tsy hisian'ny fanomezana tolotra tahàka izany intsony amin'ny hoavy.” Nampiany fa, “Isika hatrizay, ary hatramin'izao dia mbola — raha sitrak'Andriamanitra — hitoetra ho vato misakana ho an'ireo izay maniry ny hampihataka ny fiarahamonina kôetiàna amin'ny fivavahany, ny fomba fanaony sy ny fomba nentim-paharàzany.
Nandritra izany fotoana izany, marobe ireo Kôetiàna no nihevitra ireny kilasy ireny ho zavatra “ara-dalàna” afaka hita any anatin'ireo kianja sy klioba rehetra fanaovana fanatanjahantena ao Kôety.
Ho fiarovana ny dihin'ny kibo, ilay Kôetiàna mpanoratra sady mpilalao an-tsehatra, May al-Eidan, nibitsika hoe :
Ny tiako hambara, efa voavaha daholo be ireo rehetra olan'ny firenena ka ny hany sisa tavela dia ny fanakatonana ivontoerana iray na toerana iray fanaovana fanatanjahantena ahitàna fampianarana dihin'ny kibo? Inona no olana? Angamba mianatra mandihy izy [vehivavy] mba hahafahany mandihy hampifalifaly ny vadiny, na miaraka amin'ireo nàmany anatina fotoana iray fampakarambady na hetsika iray. Tsy hoe fotsiny satria ny [vehivavy iray] mianatra mandihy dia midika izany fa ho entiny mandihy any anaty toerana fivoahana mifety amin'ny alina [nightclub] na any anatin'ireo trano sasantsasany natao ho an'ny tovolahy. Tsy mahita zavatra afa-tsy amin'ny alàlan'ny saina maloto ianareo.
Nanoratra ny Kôetiàna iray manohitra ilay fanapahankevitra hoe:
Toerana iray fanaovana fanatanjahantena..
Natao ho an'ny vehivavy irery ihany..
Tahaka ireo klioba hafa rehetra isankarazany fanaovan'ny vehivavy fanatanjahantena manerana an'i Kôety, manolotra karazana fanatanjahantena samihafa sy fampianarana amin'ny endriny maro, isan'ireny ny fampianarana dihin'ny kibo..
Aiza ny olana?
Manao an'ireny fampianarana ireny daholo ireo rehetra klioba fanatanjahantena natao fotsiny ho an'ny vehivavy: dihin'ny kibo, zumba, hip hop sns…
Nahoana no manavakavaka?
Araka ny bitsika avy amin'ireo vehivavy kôetiàna sy ireo gazety sasany avy ao an-toerana, marobe ireo klioba fitaizana vatana ao Kôety no mikarakara sy mampanao kilasy fianarana dihin'ny kibo ho ampahany amin'ireo fandaharam-pampianarany ho fampihenana vatana sy fanatanjahantena. Na izany aza, tsy maintsy misoratra anarana izy ireo ary mahazo alàlana manokana mba hanao ireny karazana fampianarana ireny.
Tao amin'ny gazety an-tambajotra kôetiàna “Jaridatkum” , nambaran'ny talen'ilay klioba fa ilay kilasy izay niteraka resabe dia noeritreretina ho fampianarana ambany fitantanana manokan'ireo vehivavy mpanazatra “fitness” ary tsy hisy afa-tsy vehivavy no handray anjara aminy.
Fotoana fohy monja taorian'ny famonoantena nataona mpikambana iray hafa avy amin'ireo vahoaka manana anaram-pirenene niaviana, fantatra ihany koa amin'ny hoe bidoon, no nisy ilay tranga, famonoantena farany indrindra tamin'ireo andiany azo itarafana ny adintsaina zakain'ilay vondrompiarahamonina nandrindra ny ampolon-taona marobe iatrehany ny fampiatoana ny sata ara-dalànan-dry zareo, sy ny fomba malaina fanaon'ireo mpandray fanapahankevitra pôlitika amin'ny fandraisana an-tànana ny fihasarotan'izy ireny.
Raha miresaka io tranga io, nisy iray mpampiasa Twitter nanoratra hoe :
Gaga amin'ny fiarahamonina sivily ato Kôety aho..
Mahatezitra azy ireo ny kilasy iray fampianarana dihin'ny kibo ataona ivontoerana iray natokana ho an'ny vehivavy, fa tsy mahatezitra azy ireo ny Miozolmàna iray namono tena. #LaharamPahamehanaNyBidoons
Ao Kôety no hany misy antenimiera nofidiana malalaka any amin'ny Hoala Persika, sy ny rafitra pôlitika demaokratika indrindra any amin'ny faritra.